Ahoana no fomba hanamboarana ny sidina IETT mandritra ny Andro Eid? | RayHaber | raillynews
HomeTORKIAFaritra Marmara34 IstanbulAhoana no fomba hanamboarana ny sidina IETT mandritra ny Andro Eid?
Ahoana no fomba hanamboarana ny sidina IETT mandritra ny Andro Eid?
22 / 05 / 2020 34 Istanbul, ANKAPOBENY, Highway, Tire Wheel Systems, Headline, Faritra Marmara, Metrobus, TORKIA
Ahoana ny fomba fanaovana expeditions IETT amin'ny andro firavoravoana
Ny IETT dia hanohy ny fitaterana mandritra ny fialantsasatra. Amin'ny andro firavoravoana izay hampiharana ny curfew dia handeha amin'ny mpandeha ny mpandeha araka ny fandaharam-potoana ny asabotsy amin'ny sabotsy sy amin'ny andro hafa araka ny fandaharam-potoana ny alahady. Sambolobe 4 no nomena ny hopitaly nandritra ny 186 andro. Ao amin'ny tsipika Metrobus, ny sidina dia hatao 3 minitra maraina sy hariva.
Fitaterana 498 amin'ny sidina Eropeana sy Anatolianina no hitohy amin'ny andro fety sy andro firavoravoana. Vinavinaina ny hikarakara sidina 608 13 miaraka amin'ny fiara 642 498 amin'ny asabotsy. Amin'ny alahady, alatsinainy sy talata dia sidina 527 8 no arotsaka miaraka amin'ny fiara 881 na dia fiara XNUMX aza. Raha misy ny habetsaky ny tsipika, ny fihenan'ny tsipika mifandraika amin'ny fiara fitaterana dia hihena. Ny mponina ao Istanbul dia afaka misafidy ny lalana sy ny lalan'ny bus bus tiany hampiasainy. iett.gov.t dia afaka miainga avy any.
Ao amin'ny tsipika Metrobus, hisy ny sidina matetika eo maraina sy hariva. Amin'ny sabotsy 23 mey, hisy ny fitsangatsanganana isaky ny 06 minitra eo anelanelan'ny 10 ka hatramin'ny 3 maraina, isaky ny 10 minitra eo anelanelan'ny 16 ka hatramin'ny 10, isaky ny 16 minitra eo anelanelan'ny 20 ka hatramin'ny 3. Hisy ny dia isaky ny 20 minitra eo anelanelan'ny 24 sy 15.
Amin'ny alahady sy andro hafa amin'ny andro firavoravoana, hisy sidina isaky ny 06 minitra eo anelanelan'ny 10 ka hatramin'ny 3, ny talata ary ny alarobia, isaky ny 10 minitra eo anelanelan'ny 16 ka hatramin'ny 10, ary isaky ny 16 minitra eo anelanelan'ny 20 sy 3. 20 ka hatramin'ny 24 dia hisy ny fanentanana isaky ny 10 minitra.
23 Mey Asabotsy 24 alahady 25 alatsinainy Talata 26 may
IETTNanao fampidinana bus ho an'ny hopitaly mandritra ny 4 andro izy mba hampidirina curfew. Fitateram-bahoaka 2 nozaraina ho an'ny daholobe roa, tsy miankina 26, ny hopitaly 28 any Istanbul ao anatin'ny 4 andro. Ireo bisy dia manompo ny mpiasan'ny hopitaly eny an-dalana sy hiasa.
Nanomboka mba handoa vola ny fetin'ny fialan-tsasatry ny fisotroan-dronono ..! Ka ahoana no hatao ny fandoavam-bola?
Manomboka ny lozan'ny Metro Istanbul! .. Ahoana no hanomezana filaminana? .. alina ...
Inona no karazana Izmirim, ahoana no fividianana, fandefasana sy fanadihadiana?
IETT, miasa koa io Bayram io
IETT Fifandraisana sy IETT Call Center Call Nomery
Fiaran-dalamby IETT no niasa tamin'ny afisy tamin'ny ekipan'ny Football IETT
TCDD Yıldırım Beyazıt Taom-pandrosoana University
Ny toeram-pivarotana varotra Haydarpaşa
Tsidiho ny tanàna miaraka amin'i Sakbis amin'ny andro fararano tsara indrindra
Tondrozotra vaovao ho an'ny Engelsizmir amin'ny Corona Days
Ilay sinema fiara ao Istanbul Corona Andro mety ho Morale
Asfalt miisa 418 any amin'ny lalambe Izmir ao amin'ny Corona Andro
Lalan'ny IETT ao amin'ny curfews
Aiza ny Zki Ski Center? Ahoana no hahazoana Manao ahoana ny vidin'entana sy ny trano fandraisam-bahiny?
Ireo bus bus EGO dia hanome serivisy maimaimpoana ho an'ny olom-pirenena tsy voarara
Androany amin'ny tantara: 23 May 1933 miaraka amin'ny tsipika Filyos-Eregli
Fifandraisana bus mankany IETT, Pendik YHT Station
Filazantsara ho an'ny Kôskoela! Ny fampielezan-kevitr'i 250 dia hianjera amin'ny antsasak'adiny
Ahoana ny hividianana tapakila fiaran-dalamby amin'ny code HES? Ahoana ny fahazoana kaody Hesse? HES Code Fahazoan-dàlana amin'ny fitsangatsanganana…
Ahoana ny fanaovana fanadinana afovoany LG2020 XNUMXS ..! Eo daholo ny fanovana rehetra
Nanomboka ny fanandramana YHT Taorian'ny Fety miaraka amin'ny Fitsipika vaovao
Inona no atao hoe ePttAVM Store? Ahoana ny asa ePttAVM? Ahoana ny fomba hanokafana fivarotana ePttAVM?